ဒတ်ရ်ှနိုင်ငံ မိတ်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းများ မကွေးနှင့် မြင်းခြံဒေသများသို့ သွားရောက်လည်ပတ် | Dutch vegetable sector support Myanmar
အောက်တိုဘာလ ၁၃- ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခု
ဒတ်ရ်ှစိုက်ပျိုးရေး ကောင်စစ်ဝန် Mr. Frederik Heijink၊ လက်ထောက်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် ဒေါ်အေးအေးနွယ်တို့သည်၊ Advance Consulting မှ Mr. Frank Joosten နှင့် ဒေါ်သီမာဝင်းတို့နှင့်အတူ မကွေးဒေသရှိ East-West Seed ကုမ္ပဏီ၏ ခရမ်းချဉ်ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းရှိရာ စမ်းသပ်စိုက်ခင်းများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
မကွေးဒေသရှိ တောင်သူများနှင့်ဆောက်ရွက်ချက်များကို ဒတ်ရ်ှသံရုံးမှ စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်အဖွဲ့မှ သဘောကျခဲ့ကြသည်။
Bejo မှ Mr. Rob Bekker သည်လည်း မြင်းခြံဒေသတွင် ခြောက်သွေ့ရာသီ စတင်ချိန်၌ မျိုးစေ့ချသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ စတင်နိုင်ရန် မြင်းခြံဒေသသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် မိုးမကုန်သေးသဖြင့် အမှန်တကယ် မျိုးစေ့မချနိုင်ခဲ့သေးဘဲ ပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် Mr. Rob Bakker သည် မျိုးစေ့ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် နည်းပညာဗဟုသုတ မျှဝေခြင်းများသာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ပျိုးထောင်ပြီး အဆိုပါပျိုးပင်များကို အကျိုးဆောင်တောင်သူ ၉ ဦးရွေးချယ်ကာ မျိုးယှဉ်စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Mr. Rob Bekker သည် မျိုးစမ်းသပ်ကွက်များရှိသည့် ညောင်ဦးမြို့ရှိ Prime ၏ သုတေသနခြံသို့လည်း သွားရောက်ခဲ့သည်။
Omnivent ကုမ္ပဏီမှ Mr. Errol van Groenewoud သည် ပခုက္ကူနှင့် မြင်းခြံမြို့ပေါ်ရှိ ကြက်သွန်နီသိုလှောင်ရုံများသို့သွားရောက်ပြီး လက်ရှိ သိုလှောင်ရုံများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံများကို သွားရောက် လေ့လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် Advance Consulting မှ ဒေါ်သီမာဝင်းနှင့်အတူ အဆိုပါမြို့နှစ်မြို့ရှိ ကုန်သည်များနှင့်၊ တောင်သူကြီးများစုစည်းကာ အဆင့်မြင့်သိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်တန်းများ ပို့ချပေးခဲ့ပြီး လက်ရှိသိုလှောင်ရုံများတွင် အဆင့်မြင့်သိုလှောင်စနစ်စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။